That's so good, right?: MONDAY NIGHT FOOTBALL
အတော်ကိုကောင်းတဲ့ apartment complex တစ်ခုမှာကျွန်တော်နေထိုင်ပါတယ်။ ရေကူးကန်ဆီကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့ ပြတင်းတွေရှိတဲ့ အခန်းဖြစ်နေသည်လေ။ တစ်ချို့အချိန်တွေဆို ခပ်မိုက်မိုက်ဘဲတွေ ရေလာကူးတာကို ပြတင်းပေါက်က ထိုင်ငေးရတာ အရသာဗျ။ ရေစို နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကပ်နေတဲ့ အထည်သားတွေဟာ အဲဒီအောက်မှာ ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြနေခြင်းပေါ့။ တစ်ချို့ ဘဲတွေ ရေကူးကန်ကတက်ပြီး တန်းလျားခုံလေးတွေမှာ လှဲလျောင်းတဲ့အခါ သူတို့အထုပ်အထည်တွေ ကိုမြင်သာအောင်ပြနေတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ တစ်ခါတရံ မမာ့တမာငပဲတွေဟာ elastic ဘောင်းဘီတွေကနေ ပေါက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတာများ။ မကြာခဏ ကျွန်တော် တို့တိုက်ခန်းရဲ့မှောင်တဲ့ အခြမ်းမှာရှိတဲ့ ပြတင်းကနေ အမြဲတစေငေးဖြစ်နေတယ် စိတ်ထဲအထာကျနေတဲ့ ဘဲတစ်ပွေ ပုံမှန်ရေလာကူးတဲ့ အချိန်ရောက်ရင် အခုလောလောဆယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ သူတစ်ဦးတည်း လာကူးလေ့ရှိတယ်။ ဒီဘဲက အတော်ချောတာဗျ။ နက်မှောင်နေတဲ့ ဆံနွယ်တွေဟာ လှိုင်းတွေနှင့် ပခုံးပေါ်ဝဲလို့။ မျက်ဝန်းတွေက ကြည်ပြီးတောက်နေကာ ဘော်ဒီကလည်း ဖလားပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုး။ ရေကူးကန်ကတက်လာလို့ သူ့ပေါင်ခြံဆီကြည့်မိရင် သူများတွေလို ပုံပျက်မနေဘဲ မသိမသာလေးသာ ဖောင်းနေရော။ ကျွန်တော်သိ တယ် သူ့မှာ မိန်းကလေးရည်းစားရှိတာကို။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူ့ကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီး တစ်ခါတလေ ရေလာကူးတတ် တာကိုး။
တစ်ညနေခင်း အလုပ်က OT ဆင်းပြီးပြန်အလာ apartment complex ရဲ့ရှေ့တံခါးက၀င် စာတိုက်ပုံးရှိရာသွားပြီး ကျွန်တော့်အတွက်စာ ရောက်မ ရောက် စစ်ဆေးကြည့်ကာ စာအချို့ကိုယူလိုက်ပါတယ်။ ဘေးဘီကို တစ်ချက်ကြည့်မိတော့ ဆံသားကောက်ကောက်တွေနှင့် ဘဲတစ်ပွေ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့ သူ့စာတွေကောက်နေတာကို မြင်မိရတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုမကူညီခဲ့နိုင်ပေမဲ့ ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်း လှတဲ့ သူ့ တင်ပါးတွေကို သတိထားမိပါရဲ့။ ခဏနေတော့ မတ်တပ်ရပ်ကာ နောက်ပြန်လှည့်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ 'Hi' တဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း အလိုအလျောက် 'Howdy' ပေါ့။
သူ့နာမည်က ဂျင်မီပါတဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း Alex ပါပေါ့။ သူ့ကောင်မလေးကို လေယာဉ်ကွင်းလိုက်ပို့နေလို့ အိမ်ပြန်နောက်ကျနေ တာ။ ကောင်မလေးအမေ ရေချိုးခန်းထဲချော်လဲပြီး တင်ပါးဆုံရိုးအက်သွားလို့ အရေးတကြီး လေယာဉ်နှင့် ပြန်ရသတဲ့။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ည ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့တောင် နောက်ကျနေပြီ စသဖြင့် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် မိတ်ဆက်စကားဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အလုပ်မှာ အချိန်ပို ဆင်းနေလို့ နောက်ကျရခြင်းဖြစ်ပြီး ဘောလုံးပွဲအဆုံးသတ်အဖြေကို ကြည့်ချင်ကြောင်း ပြန်ပြောဖြစ်ပါရဲ့။
ဒါဆို သူနဲ့လာကြည့်ပါလား တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလို့။ ဘောလုံးပွဲက အဖော်နဲ့ကြည့်မှကောင်းတာတဲ့လေ။ ကျွန်တော်က 'အ၀တ် သွားလဲလိုက်ဦးမယ်ဗျာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်အောင်' လို့ဆိုကာ ကျွန်တော့်အခန်းဘက်တက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ သူက အခန်းအမှတ် ၂၀၇ မှာနေတာကျွန်တော်လာရင် တံခါးကို တွန်းဖွန့်ပြီးသာဝင်ခဲ့တော့ ဖွင့်ထားပါ့မယ် သူလည်းအ၀တ်လဲလှယ်ဦးမှာ ကြောင့်ဖြစ်ပါသတဲ့။ အခန်းပြန်ရောက်တော့ T-shirt တစ်ထည်နှင့်ချည်သားဘောင်းဘီတိုကိုဝတ်ဆင်လိုက်ပါပြီ။ အတွင်းခံတော့ မ၀တ်တော့ပါဘူးလေ ဒီညနေစောင်းက အတော့်ကိုပူတာ။
အခန်းနံပါတ် ၂၀၇ ရောက်တော့ အခန်းတံခါးကို အသာတွန်းဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ တီဗီမှာ ဘောလုံးပွဲက အရှိန်ကောင်းစွာ ကန်နေကြလေ့။ အိပ်ခန်းဆီက ရေကျသံတွေကြားနေရတာကြောင့် 'Hey, ကျွန်တော်ရောက်နေပြီ' လို့သွားအော်လိုက်တယ်။ သူကလည်း 'သက်သာသ လို နေ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဘီယာရှိတယ်ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ယူသောက်လိုက်တော့ကွာ' တဲ့ပြန်ဧည့်ခံပါရဲ့ အသံနဲ့။ ရေခဲသေတ္တာထဲက ဘီယာတစ်ဗူးလောက်ဆွဲကာ sofa မှာထိုင်ပြီး ဘောလုံးပွဲကို စိတ်ပါဝင်စား ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ပါ၏။
နှစ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ ဂျင်မီ အပြေးဘောင်းဘီတိုလေး နှင့်ဝင်လာတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို စိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတာ ရိုင်းတယ်ထင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဘော်ဒီက စိုက်ကြည့်ဖြစ်အောင်ကိုလှတာ။ အတော့်ကို တောင့်တင်းအချိုးကျလှပါရဲ့။ သူ့ abs အထစ်တွေက ကျွန်တော့်ကို ပင်လယ်လှိုင်းမူးသလို မိန့်မူးသွားစေတာ။
ဂျင်မီက ဘီယာနှင့်တွဲပြီး popcorn စားချင်ရင် သူမီးဖိုချောင်ထဲသွားယူပေးမယ်လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်က 'Sure' လို့သာ။ သူပြန်လာ တော့ ဘီယာရယ် popcorn တွေထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်လုံးကြီးရယ် ကိုင်လာပြီးရှေ့ကစားပွဲမှာ ချထားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ဘေး ကပ်ထိုင်လိုက်ရင်း ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ကြတာ ကန်ချက်တွေ၊ ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကို ဝေဖန်မှတ်ချက်ပေးကြရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် အားရပါးရ အော်ဟစ်အားပေးကြတာ ကျွန်တော်တို့တွေ။
မန်ယူက အနိုင်ဂိုးသွင်းရင်း ပြိုင်ဘက်အသင်းကို ဒုတိယရစေလိုက်ကာ ဘောလုံးပွဲပြီးသွားချိန်မှာတော့ ဘီယာထပ်ယူဦးမလား သူကမေး တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဘယ်ငြင်းလိမ့်မလဲ။ ကျွန်တော်တို့ အားကစားတွေ အကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်အကိုင်သဘာဝတွေ၊ တစ်ခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် စကားပြောပွဲလေးဖန်တီးဖြစ်ကြတယ်။ နာရီဝက်လောက်ကြာ တော့ ကျွန်တော် သူ့ကို ပြောရတာပေါ့ မနက်စောစော အလုပ်သွားရဦးမယ် ပြန်ဖို့သင့်ပြီလို့။ သူ့အနေနဲ့ကတော့ အိပ်ယာထဲသွားဖို့ဆို စိတ်တွေက မအိပ်ချင်သေးတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက်သူကြည့်ဦးမယ်တဲ့။ သူနဲ့အတူ အဲဒီရုပ်ရှင်ကို နည်းနည်းလောက်ကြည့်သွားပါ လို့ပြောတော့ နည်းနည်း တော့ထူးဆန်းတယ်လို့ တွေးမိပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းကြည့်သွားမယ်လို့ အဖြေပေးလိုက် ပါတယ်။
ဂျင်မီ ကထကာ သူ့အိပ်ခန်းထဲသွား DVD နှစ်ချပ်လောက် ဆွဲပြီးပြန်လာပါတယ်။ DVD player ထဲကိုထည့် Play ကိုနှိပ်လိုက်ကာ sofa ပေါ်ပြန်ထိုင်ရင်း ရှေ့ကစားပွဲပုလေးပေါ်ခြေထောက်လှန်းတင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်မျိုး TV Screen မှာပေါ် လာပါရဲ့ porno flick တစ်ခု။ ဒီဇာတ်ကားအစမှာတော့ စုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ ပျိုးတာပါ။ နီဂရိုးဘဲကြီးတစ်ပွေက ခပ်သွယ်သွယ် အဖြူမလေးရဲ့ ပစ္စည်းကို လျှာကျွေးတယ်ကောင်းကောင်း။ ပြီးမှ -ိုးဖို့ပြင်တော့တာ။ ကျွန်တော်လည်း ဇာတ်လမ်းမှာ အသာမျှောကြည့်ရင်း ဂျင်မီဘက် မသိမသာကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဘောင်းဘီကြီးဖောင်းကားပြီး မိုးကာတဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေရော။ သူ့ကိုသတိထားကြည့်မိရုံဖြင့် ကျွန်တော့် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်လာပါတော့တယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့ အတွဲက ဟန်ချက်ညီညီ-ိုးပွဲဆင်နေတုန်း နောက်ဘဲတစ်ပွေ ထပ်ရောက်လာကာ3– way စလုပ်ကြပါရော။ တစ်ယောက်က ပါးစပ်ဟပြီးအော်နေတဲ့ စော်ရဲ့အာခံတွင်းထဲ သူ့ငပဲကြီးထည့်လိုက်ကာ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ စော်ရဲ့ချယ်ရီပေါက်ကို ဒစ်ကြီးကြီးနှင့် အားရပါးရမွှေနေတာ။ ဂျင်မီဘက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ငပဲဟာ ရာနှုန်းပြည့်မာတောင် နေပြီး သူ့လက်တွေဟာ ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်စပြုနေပါပြီ။ မျက်ဝန်းတွေကလည်း ဖောင်းကြွပြီး ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးဟတတ ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီမသိမသာကြည့်ရဲ့။ 'ဂလု' ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက သွားရည်တွေများ တမြှားမြှာ်းကျကုန်ပြီထင်ရပါတယ် ဂျင်မီသူ့ဘောင်းဘီကို ဒူးတွေအထိဆွဲချလိုက်ရင်း လက်အစုံနှင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်ကိုင်ကာ အထက်အောက်ကစားတာမြင်လိုက်ရတော့။
'Alex, မင်းငပဲကို ဆွဲထုတ်ပြီး ငါ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရပါတယ် ဘော်ဒါရ အေးဆေးပေါ့'
ကျွန်တော်လည်း အတင်းရုန်းကန်ထနေတဲ့ညီဘွားကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ညီဘွားကလည်း မာန်ထလိုက်ပုံများ တဆစ်ဆစ် တောင်နာသလားလို့။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာဖြစ်မလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်ကြိုတင်မမျှော်မှန်းခဲ့ပါ။ ဂျင်မီဆိုဖာရှေ့က စားပွဲပုပေါ်တင်ထားတဲ့ သူ့ခြေထောက်တွေကို ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံနှင့် အနီးကပ်ဆုံးတင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ခြေဖ၀ါးနုနုတွေဖြင့် အသာပွတ်သပ်ကြည့် ပါရော။ 'အတော်ကောင်းတဲ့ အသားချောင်းကြီးပါလားကွ' ဟုတ်တယ် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းက ဂျင်မီထက်နည်းနည်း ပိုတုတ်ပေမဲ့ သူ့ လောက်တော့မရှည်။ ခြေဖ၀ါးနှင့်ပွတ်သပ်ရတာ မကျေနပ်တော့တဲ့ ဂျင်မီ သူ့ညာဘက်လက်ကိုသုံးကာ ကျွန်တော့် -ီးကိုကစားပါတော့ တယ် ခဏသောအချိန်မှာ။
ရုပ်ရှင်က အဆုံးသတ်ဖို့နီးလာပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းကဘယ်လိုစတယ်သာသိပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိ ဘူးရယ်။ သူကလည်း ထို့အတူ ကျွန်တော့်-ီးကိုကိုင်ပြီး ကစားတာကိုသာ အာရုံစူးစိုက်နေတော့တာ။ ရုတ်တရက် သူဆိုဖာပေါ်မှောက် ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီမျက်နှာအပ်ရင်း ငပဲကို ပူနွေးနေတဲ့ အာခံတွင်းထဲ အဆုံးထည့်လိုက်တာ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ကျွန်တော့်ဆီးစပ်က ခြုံပုတ်ငယ်ထိတွေ့တဲ့အထိ။ သူလျှာကို-ိင်တံမှာရစ်ပတ်လိုက်ရင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်တာများ ဖီးလ်အတော်ကောင်းတယ်။ တစ်ချက် တစ်ချက် ပါးစပ်ကိုဟရင်း သူ့လည်မျိုထဲရောက်သည်အထိ မျိုမျိုချတာ အပျိုစင်တစ်ယောက်နှင့် လိင်ဆက်ဆံနေရသလိုပါပဲ။ လျှောကနဲ အပြင်ထုတ် ကွမ်းသီးခေါင်းဝလေးကို လျှာနဲ့ကလိ၊ လျှောကနဲ အာခံတွင်းထဲမျိုချအလုပ်များလှတဲ့ ဂျင်မီကြောင့် ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေ တစစ်စစ်လှုပ်ရှားကာ ပန်းထွက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပါရော။သူ့အာခံတွင်းမှ အသာထုတ်ရင်း ကွမ်းသီး ခေါင်းကိုဖွဖွစုပ်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ခံစားချက် အထွဋ်အထိပ်ဖြစ်လာတာကြောင့် သူစုပ်နေတာကိုရပ်လိုက် အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ပါးစပ် ထဲပန်းထည့်မိတော့မယ်လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်။ သူကမကြားယောက်ပြုရင်း တဖြည်းဖြည်းမျှင်းစုပ်ကာ လည်မျိုထဲထိလျောကနဲ လျှောက နဲသွင်းလိုက်တာကြောင့် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်စွာ ပေါက်ကွဲထွက်သွားပါရော အများအပြား။ ဂျေမီတစ်ယောက် အသက်ရှူဖို့ခဏနားပေမဲ့ ကျွန်တော့်အရည်ပျစ်တွေ တစ်စက်ကျန်တဲ့အထိ လျှာနဲ့လျက်နေရဲ့။
ကျွန်တော်အားကုန်သလိုခံစားရပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သိနေတယ် သူ့ရဲ့ခပ်ထွားထွားငပဲက ပေးတဲ့အရသာကိုခံစားချင်သေးတယ် ဆိုတာ။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့မာထောင်နေတဲ့ ငပဲရှိရာ ခေါင်းငုံ့လိုက်ရင်း ရှည်လျားတုတ်ခိုင်လှတဲ့ အသားချောင်းကို ပါးစပ်ထဲမှတစ်ဆင့် လည်မျိုထဲထိ တစ်လက်မခြင်း သွင်းကာ အရသာကို တသိမ့်သိမ့်ခံစားရပါတယ်။ ဂျင်မီကလည်း ပြည့်တင်းနေတဲ့ သူ့တင်ပါးများကို အားပြုကာ ငပဲကို ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲ ပိုပိုဝင်အောင်ကြိုးစားလှုပ်ရှားပါရော။ စည်းချက်ကျ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲအသွင်းအထုတ်လုပ် နေတဲ့ ဂျင်မီပစ္စည်းဟာ ရှည်သထက်ရှည်ပြီး ပိုတုတ်လာသလို ခံစားရပါရဲ့။ ခဏလေးကြာတော့ ဆောင့်သွင်းချက်တွေမြန်သထက် မြန်လာတယ်။ သူ့ရဲ့သန်မာလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လည်း တုန်ခါမှုတွေများလာပြီး ရွှေရည်တွေပစ်လွှတ်ဖို့အသင့်။ ဒါကြောင့်ရှည်လျားလှတဲ့ သူ့ငပဲကိုပါးစပ်ထဲက ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာ ကျွန်တော်ကတင်ပါးတွေကို ထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း ပါးစပ်ထဲမှာပဲထည့်ထားဖို့ လုပ်ဆောင်လိုက် ပါတယ်။ သူတစ်ချက်အပြင်ကို ထုတ်လိုက်ဖို့လုပ်ရင်းမှ တင်ပါးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာကာ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတော့ ပူနွေးနေ တဲ့ အရည်ပျစ်တွေ တစ်ခါ နှစ်ခါ သုံးခါ လေးခါ ပန်းထုတ်ပါရဲ့ရွှေပြွန်ထဲမှ။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့အည်တွေ တစ်စက်မှထွေးမထုတ်ပစ်ဖူး။
အဲဒီနောက် ဂျင်မီ သူ့ပစ္စည်းကို ကွမ်းသီးခေါင်းထိဆွဲထုတ်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးမှ နှုတ်ခမ်းမစေ့တစေ့ထဲမှ အာခံတွင်းထဲ လေးငါးကြိမ် လောက် ရှန်တိန်လုပ်ကာ ကျွန်တော့်ကို အံ့သြအောင် ထပ်မံပြုမူပြန်တာပေါ့။ အရသာရှိလှတဲ့ သူ့ရွှေရည်တွေကို နောက်ထပ် နှစ်ခါ သုံးခါလောက်ထပ်မံပန်းထုတ်ပေးတာလေ။
Sofa ပေါ်ပြန်လှဲမှီပြီးထိုင်လိုက်တယ် ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက သူ့ပစ္စည်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးနောက်။ ကိစ္စ၀စ္စပြီးတော့လည်း ယောက်ျား တစ်ယောက်နှင့် လိင်ပတ်သက်မှုဖြစ်တာ ဘယ်တုန်းကမှ မဟုတ်တဲ့ဟန်။ အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးသူတစ်ဦးလို အချိုးချိုးပါရဲ့။ တိုင်ကပ်နာရီကို သူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် သူကျွန်တော့်ကိုမေးတယ် မနက်အလုပ်ဘယ်ချိန်သွားမှာလဲတဲ့။ မနက်၇ နာရီ လောက်လို့ပြောတော့ ဒီညပြန်မနေတော့ဘဲ သူ့အခန်းမှာပဲ အဖော်ပြုအိပ်ပေးပါလားဆိုပဲ။ ပေးလာတဲ့ အခွင့်အရေး အလွတ်မခံ မငြင်းဆန်တော့ဘဲ သဘောညီလိုက်ပါရော။ ခပ်ထူထူမွှေ့ယာပေါ်က စောင်ပါးအောက်ကိုနှစ်ယောက်သား အ၀တ်မပါ ၀င်အိပ်လိုက် ကြရင်း ဖက်ပြုရင်းအိပ်ပျော်သွားကြပါတော့တယ်။
မနက် ၂နာရီခွဲလောက်မှာ ဂျင်မီကိုကျောပေးအိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးများဆီက နုညံ့တဲ့ထိုးသွင်းမှုတစ်ခုကြောင့် နိုးလာရပါတယ်။ Lube တွေထည့်ထားတဲ့ ခရေ၀ဆီ သူ့ဒစ်ကြီးကြီးကို အသာတစ်ချက်ခြင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်နေခြင်းကြောင့် အ၀င်အထွက်မှာ နာ ကျင်မှုမရှိ။ မြန်ဆန်တဲ့ဆောင့်ချက်များမဟုတ်ဘဲ ဇိမ်ယူပြီး အရသာခံနေသည့် ဆောင့်ချက်များဟာ ကျွန်တော့် prostate ကို သူ့ဒစ် ထိပ်ဖြင့်လာလာ ထိစေ သောကြောင့် ပေါင်ကြားက ညီဘွားဟာလည်း မာသတက်မာလာပါရော။ ကျွန်တော်နိုးလာမှန်းသိတော့ မရုန်း ဖယ်သွားစေရေး ခါး ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်လိုက်ကော ဆောင့်သွင်းချက်ကို နည်းနည်းလေးသွက်လာစေပါ၏။ နှုတ်ဖျားက ဖီးလ် အရှိန်မြင့်သံတွေပေါ် ထွက်လာသလို သူ့ဆောင့်ချက်များဟာလည်း မြန်သထက်မြန်လာတဲ့ ခဏ ကျွန်တော့်ခါးကို တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင် လိုက်ရင်း သူ့ခါးကို ကော့ကာ ကော့ကာဖြင့် ပန်းထည့်လိုက်ပါတယ် ရွှေရည်တွေ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း အလားတူ အိပ်ယာခင်းများဆီ ဒလဟော။
ဂျင်မီ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်ကာ လှဲနေရင်း သူ့ငပဲကို ခရေတွင်းထဲနှစ်ထားတာ လုံးဝပျော့သွားသည်အထိပါ။ သူကျွန်တော့် လည်တိုင်ကို အနမ်းဖွဖွပေးပြီးနောက် အိပ်ပျော်သွားကြတာ မနက် ၆နာရီထိုး alarm မြည်တော့မှ နှစ်ဦးသား တထိုင်ဖြစ်ကြတယ်။ ဂျင်မီ ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲကိုင်ကာ ရေချိုးခန်းဆီ မနက်ခင်းဆီးသွားဖို့ခေါ်ကာ အတူပေါက်ကြရင်း နောက်တော့ အ၀တ်တွေဝတ်ဆင်ရင်း ဧည့်ခန်းဆီထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ သူက ဒီလိုနှစ်ဦးသား အထိအတွေ့ကိစ္စကို အချို့သော အားလပ်ချိန်တွေမှာ ထပ်လုပ်ချင်သေးသတဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း သဘောတူလိုက်တာ အမြန်အဆန်။ သူ့ရည်းစားကောင်မလေးက အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လောက်တော့ ကြာမယ်၊ ကျွန်တော်အလိုရှိရင်တော့ ညတိုင်းနှစ်ဦးသား အတူအချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါသတဲ့။ သူ့ကောင်မလေး မပြန်လာခင်ပေါ့လေ။
ကျွန်တော်နှင့် ဂျင်မီ တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ အချိန်ကောင်းလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ လိင်ဆက်ဆံမှုအနေအထား၊ စုပ်မှုတ်ချ နည်း လမ်းတွေထဲက ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေကိုရော စမ်းသပ်လေ့လာနေခဲ့ကြတယ်လေ။ တစ်ချို့အချိန်တွေမှာတော့ သူ့ ခရေ၀ကို အပေါက်ချဲ့စေချင်တယ်။ ကောင်မလေးပြန်မလာခင်အချိန်ထိတော့ သူက ကျွန်တော့်အခန်းကိုလာရင်လာ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်က သူ့အခန်းကို သွား နှစ်ဦးသားပြင်းပျတပ်မက်တဲ့ အရသာကို ခံစားကြတာ အဟုတ်တကယ်။
'ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ.....Sentosa beach က siloso ဘက်ကိုသွားရအောင်လေဗျာ မရောက်တာကြာပြီ'
'အင်း...အလုပ်နဲ့အိမ် ဒါပဲဆိုတော့ မသွားဖြစ်ဘူး။ နေ့လယ်စာကို စားနေကျ ပင်လယ်စာဆိုင်မှာပဲစားရအောင်'
'ဒါတော့ခက်ပြီဟုတ်လား? ခင်ဗျားတို့ Ramazan month က သြဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၃၀ထိမလား? အခု....အော် Rozah စောင့်ထားတယ်?'
'ဟုတ်ပြီ ဂျင်မီ လိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ ခင်ဗျားကောင်မလေး ချောမချောလိုက်ကြည့်မယ်လေ။ စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာ စနေမှပဲ သွားကြတာပေါ့။ အ၀တ်လဲပြီး ချက်ချင်းလာခဲ့မယ် ...ဘိုင်'
လေယာဉ်ကွင်းကို သူ့ကောင်မလေးကို သွားကြိုမတဲ့။ ကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားပြီး သူငယ်ချင်းသစ်အဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းခံရမှာပါ။ အ၀တ်တွေအားလုံးလဲ....သူဝယ်ပေးထားတဲ့ ရေမွှေးကို စွတ်လိုက်တာ...အားပါး မွှေးမှမွှေး။
Estee Lauder ရဲ့ ... Beyond Paradise….
Alex Aung (3 August 2010)
Posted by Alex Aung at 2:46 PM